नेपालमा १२०० मिटर सम्मको उचाइमा पाइने असुरो वनमा पाइने ज’डिबुटी हो । आयु’र्वेदमा यसको महत्वको विषयमा विशेष च’र्चा हुन्छ ।
यो औष’धीय गुण भएको बु’ट्यान वर्गमा पर्ने वन’स्पति हो। विभिन्न औ’षधीय गुण हुने असुरको प्रयोग गर्दा रोगीको क्षमता र मात्राको संयोजन नमिलेमा हानि’कारक पनि हुन सक्छ । अ’सुरोको बोट बन/जंगल, धाराको छेउछाउ साथै खुल्ला ठाउँहरुमा पाइन्छ ।
असुरोको बुटा प्रायः १ मिटर भन्दा अग्लो हुन्छ र बढीमा २.५ मिटर सम्म अग्लो हुन्छ। यसको पातको लम्बाई २० सेन्टि’मिटर र चौडाई ७.५ से.मीसम्म हुन्छ ।पातको कि’नारा धा’रिलो हुन्छ। फूलहरू एउटै डाँठमा गु’च्चमुच्च हुन्छन् । फूलको रंग सेतोमा प्याजी नसाका धर्का देखिन्छ । वन औष’धिको नामले पनि असुरो’लाई चिनिन्छ ।
एकपटक उ’म्रिसकेपछि प्राय नाश नहुने असुरो खेतवारी एवं का’न्लाहरुमा पनि प्रशस्तै पाइन्छ । श्वा’समार्गमा जमेर रहेको कफलाई यसले सजिलै बाहिर निकाल्न मद्दत पु-याउँछ ।
गाउँघरमा असुराको पातलाई सुकाएर चिलिममा राखेर त’माखु जसरी खाने गरिएको पाइन्छ । यसको हरियो पातको रस निचोरेर मह वा अदु’वाको रससँग खाँदा पुरानो खो’की र दम पनि निको हुन्छ। असुरोलाई आउँ तथा मासी परेको बेलामा मिश्रीसँग मिलाएर खाँदा फाइदा गर्छ ।
त्यस्तै धेरै दिनदेखि आएको ज्व’रोमा चिरा’इतो कुट्की र पिपलासँग मिलाएर यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पात वा फूलको रस १० मिली र सुपको रूपमा ४० देखि ८० मिलि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको पात र जरा विशेष गरेर खोकी थाम्ने औ’षधीहरूमा प्रयोग गरिन्छ ।
आयुर्वेदअनुसार यसको प्रयोग घाँटी दुख्ने, हृ’दयरोग, द’म, ज्व’रो, कमलपि’त्त इत्यादिमा प्रयोग गरिन्छ । तर असुरोको प्रयोग गर्दा रो’गीको क्षम’ता र मात्राको संयोजन भने मिलाउन आवश्यक रहन्छ ।
कस्तो अवस्थामा असुरोको प्रयोग गर्ने ? रुघा, खोकी, दम, बाथ, ज्व’रो, पि’साव पोलेमा, पि’त्तथैलीमा गडब’डी देखिएमा, हृदयरो’ग, ज’ण्डिस, नाक र मुखबाट र’गत बगेमा, वि’कार र’क्तको शु’द्धीकरण, पेटमा जुका परेमा, छातीको रो’ग, क्षयरो’ग, ब्रोङ’काइटिस, जो’र्नी दुखेमा वा सुन्निएमा, घाँटी
आँखा पो’लेमा, जीउ र काँ’खी ग’न्हाएको अवस्थामा समेत यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको पातबाट काढा पकाएर सेवन गरिन्छ। च’र्मरोगमा पातको लेदो दलिन्छ। शरीरमा रक्त प्र’वाह बढाउन यसको फूलको सेवन गरिन्छ। साथै अ’सुरोबाट जैविक बि’षादी र हरियो मल बनाइन्छ ।
२०७७ चैत्र २९, आईतवार ००:२४ गते 1 Minute 927 Views
ब्लड प्रेसर लो छ ? त्यसो भए यी चीज खानुहोस् !